Individual Lending Loan Officer (Mingalardon & Hlegu) at Early Dawn Microfinance | MyJobs
/ Individual Lending Loan Officer (Mingalardon & Hlegu)
Ensure data and information in loan applications is accurate and of acceptable quality, and ensure also the authenticity of documentation.
ငွေချေးသူ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို အတည်ပြုစစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းပရ၀ဏ် နှင့် အနီးတ၀ိုက်တွင် သွားရောက်လည်ပတ် စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း။
Evaluate the willingness and capacity to repay new and existing clients following DAWN’s loan evaluation methodology.
Dawn မှချမှတ်ထားသော နည်းလမ်းအတိုင်း ချေးငွေယူသူ အသစ် နှင့် အဟောင်းတို့၏ ပြန်ဆပ်လိုစိတ် နှင့် ပြန်ဆပ်နိုင်စွမ်းများကို ချင့်ချိန်ခန့်မှန်နိုင်ခြင်း။
ချေးငွေခွင့်ပြုရန် အတွက် ချေးငွေစီစစ် အကဲဖြတ်အဖွဲ့နှင့်အတူ ဆွေးနွေးထောက်ခံခြင်းများတွင်လည်း ပါဝင်ခြင်း။
Develop business relationships with clients to support their business success and cultivate loyalty to DAWN.
ငွေချေးသူများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရန်အတွက် ငွေချေးသူများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခြင်း။
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ပြဿနာများကို သိရှိနိုင်ရန် ငွေချေးသူ၏ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း။
အဖွဲ့အစည်း၏ ချက်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အညီ ငွေနောက်ကျမှု ပြဿနာကိုင်တွင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း။
ဌာနမှ ချမှတ်ထားသော လျာထားချက်များဖြစ်သည့် ချေးငွေယူသူများ၊ ထုတ်ချေးမည့် ငွေပမာတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းများ ပြည့်မှီနိုင်ရန် အတွက် မန်နေဂျာအား ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း။
ကြီးကြပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တစ်ခြားသော တာဝန်များ ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း။
University graduate in finance, economics, accounting, or related field.
တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ စီပွားရေး (သို့) ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရေး (သို့) စာရင်းအင်းတို့ နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
One year working experience asamicrofinance individual loan officer or in retail banking or sales preferably in the specific market segment for the Individual Lending Unit.
တစ်ဦးချင်းချေးငွေ အရာရှိရာထူးဖြင့် အနည်းဆုံး တစ်နှစ် အတွေ့အကြုံရှိရမည် (သို့) တစ်ဦးအလိုက် ချေးငွေလုပ်ငန်းတွင် တိကျခိုင်မာသော ဈေးကွက်အတွင်း ၀န်ဆောင်မှုပေးခဲ့ဖူးသော အတွေ့ကြုံ ရှိရမည်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး နှင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်းအပေါ် အထူးကောင်းမွန်ရမည်။
ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီစစ်တွက်ချက်မှုများ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရမည်။
Strong intuition; able to assess the character of potential clients.
အလားအလာရှိသော ငွေချေးသူ၏ စရိုက်လက္ခဏာများကို လေ့လာအကဲဖြဖတ်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။
Willingness to work in low-income neighborhoods and spendalong time in the field.
လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်များအတွင်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုစိတ် ရှိရမည်။